Yini ongayivakashela e-Algeria | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayivakashela e-Algeria
UMariela Carril | | I-Algeria, Amathiphu
Elinye lamazwe angaphezu kwama-50 akha izwekazi i-Afrika I-Algeria, izwe elihlale kuyo yonke into kuwo wonke umlando walo nokuthi, ekubeni sisesizukulwaneni sezinhlobo zethu, lisigcinela lona amagugu emvelo nawokuvubukula baluleke kakhulu.
I-Algeria izwe elikhulu impela, linezintaba namabhishi amahle, ngakho-ke uma ufuna ukwazi okwengeziwe, cwaninga ngokwedlule kwaleli zwe elicebile nelithakazelisayo, kufanele ungene endizeni futhi ulazi. Yini engabonwa noma yini engavakashelwa e-Algeria? Ake sibone
2 Algeria ezokuvakasha
3 Ungahamba kanjani e-Algeria
Ngokomthetho kufanele sazi ukuthi igama le-Algeria lixhunywe ngokungenakugwenywa ne Ukoloni lwaseFrance nonya lwayo, empini yombango yama-90s futhi ngokulahlekelwa okukhulu, izimpilo ezingaba yizinkulungwane ezingama-20. Kepha kufanele siqhubeke.
Ngamazwe ase-Algeria badlulile abaseFenike, abaseRoma, uMbuso WaseByzantium, abantu base-Ottoman, abaphangi futhi yebo, namaFulentshi. Kungakho kuyimbiza encibilikayo yamasiko kanye nesango lokuya izintaba, amabhishi nezingwadule.
Sishilo ngenhla ukuthi base-Afrika yabo izindawo zokuvubukula Ziyathakazelisa kakhulu, ngakho-ke zithole izinsalela ze-hominids ezineminyaka engaphezu kwezigidi ezimbili kanye neHomo Sapiens. Futhi ine imidwebo yasendulo futhi ebalulekile yomhume futhi ngenhlanhla namuhla konke kuvikelwe ngaphakathi kwamapaki kazwelonke. Iqiniso ngukuthi le ngcebo ekugcineni isindile nasesikhungweni samakoloni aseFrance.
Iqiniso yilokho IFrance inesahluko esihle esinegazi e-Algeria. Ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili, kwaqala inqubo yokwehlukanisa umbuso e-Asia nase-Afrika, kepha esimweni sekoloni laseFrance i-Algeria, iFrance ayizange ifune ukuyisebenzisa ngakho-ke kwaba nokuhlubuka okwanquma inkululeko ngo-1962. Umlando usitshela ukuthi ingcindezelo yaseFrance yayinegazi kakhulu futhi kukhona labo abathi beza ukuzobhubhisa u-15% wabantu base-Algeria.
Idolobha elibaluleke kakhulu I-Algiers, inhlokodolobha. Ingxenye enkulu yayo ingugwadule, edume kakhulu Ugwadule iSaharakepha kukhona futhi amahlathi, ama-steppes namanye amaxhaphozi. Umnotho wakho ususelwe kuphi? Inowoyela, isiliva, igesi nomsebenzi wokudoba nowezolimo omningi. Kusobala, inhliziyo yomnotho wayo inguwoyela futhi usezingeni le-14 ohlwini lwamazwe acebe kakhulu kawoyela.
Akukhathalekile ukuthi uhamba ngasiphi isikhathi sonyaka, kukhona okuthile kwawo wonke umuntu ngoba uma uya ehlobo futhi kushisa kunamabhishi futhi uma uthanda ubusika futhi ufuna ukubona iqhwa nokushushuluza kunezintaba. Enhlokodolobha unezinye iminyuziyamu enconyiwe: The IBardo Museum Imayelana nomlando kanye nemivubukulo futhi uzokwazi ukubona eminye yemidwebo yomhume yaseTassili N'Aijer National Park, eSahara. Kukhona futhi i- IMnyuziyamu Yezamasiko Nobuciko Obudumile futhi i UMnyuziyamu Kazwelonke Wezobuciko Banamuhla Nobesimanje futhi i UMnyuziyamu Kazwelonke Wezinto Zakudala. Kamuva, uma uhambela amanye amadolobha, zama ukubona ukuthi ingabe ikhona yini iminyuziyamu ngoba ngalinye likhethekile.
Ngakho-ke, ethekwini laseCherchell uzobona izinto zasendulo zamaRoma nezamaGreki kanye nedolobha lezinto zikaConstantine kanye nezithombe eziqoshwe ezindaweni zokuvubukula. Yonke indawo kuneminyuziyamu nokubazi kuyindlela enhle yokusondela kusiko lase-Algeria.
Uma uthanda ukuvubukula kanye nomlando ngaleso sikhathi kunezindawo eziyisikhombisa ezimenyezelwe ngamaGugu Omhlaba: la UKasbah wase-Algiers, the Amadolobha aseBerber eVall de M'zab, amanxiwa e Inqaba yaseQal'aa Beni Hammad, izintaba ze Tassili n'Anjer, ngemidwebo yalo yomhume, futhi amanxiwa aseDjemila, eTipasa naseTimgad.
Amanxiwa e-Djemila asibuyisela ebukhoneni bamaRoma endaweni futhi uma uzokhetha eyodwa kuphela ohlwini, lokhu kuyindlela engcono kakhulu. Amanxiwa alondolozwe kahle futhi agqamile eNyakatho Afrika yonke. Yayekwa ngekhulu lesi-XNUMX futhi njengoba uhamba emigwaqweni yayo engenalutho ungacabanga ukuthi impilo yayinjani lapho emakhulwini eminyaka adlule. Iphinde ibe nomnyuziyamu.
Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda imisebenzi yangaphandle nemvelo unedlanzana le- Amapaki Kazwelonke: Chrea, Djurdjura, Ahaggar, Belezma, El Kala, Gouraya, Tassili n'Aijer, Taza naseTlemcen. Amanye amapaki asogwini (i-El Kala, iGourraya, iTaza), amanye aphakathi kwezintaba (iBhelezma, iChrea, iBelezma, phakathi kwezinye), kukhona namapaki asemaqeleni (i-Djebel Aissa) noma eSahara (Tassili, l'Ahaggar) . Futhi akukho ukuntuleka kweziqiwu.
Ukwazi lezi zindawo kusho ukuqasha izinkambo kuma-ejensi akhethekile noma ngqo ehhotela. Ungabhalisela i- ukuvakasha emalolini ayi-4 x4, kudabula iSahara, ukugibela emhlane we hhashi ukugibela ikamela. Kunendawo enhle ngokukhethekile ye- ukuhamba: Hoggar, enezintaba ezinhle, izindunduma ezinobuciko be-rock nezimbali nezilwane. Ubuhle be-Algeria buyasendle ngoba phela akulona izwe elithuthuke kakhulu ngakho-ke ngingasho ukuthi likhanya kakhulu.
Uma ungumSulumane uzofuna ukuvakashela amathempeli ngoba i-Islam iyinkolo eyandile ezweni. Ziningi kepha ezinye zibaluleke ukwedlula ezinye ngokubuka komlando. Isibonelo, i- IGreat Mosque yaseTiemcen, iGreat Mosque yase-Algeria kanye neKetchaoua, eyiGugu Lomhlaba ngokusho kwe-UNESCO. Uma ungumKristu ungavakashela isonto lamaKatolika elihle ngoba liseweni elibheke ethekwini lenhlokodolobha: UMama wethu wase-Afrika, ehlehlela emuva ku-1872 futhi inemidwebo ecebile yenkolo nemidwebo yobuciko.
Ungahamba kanjani e-Algeria
Indlela enhle yokuhamba ezweni lonke yile ngesitimela noma ngemoto ngoba iqiniso ukuthi izinketho zokuhamba zilinganiselwe impela. Isitimela siyintengo ejwayelekile kanti namathikithi ayabiza. Iziteshi ziyindawo ephithizelayo futhi edidayo ngakho-ke kufanele uqaphele, ufike kusenesikhathi, ulawule kahle ulimi futhi wazi ukuthi lusebenza kanjani ngaphambi kokwenza ukubhuka noma ukuthenga.
Ungakwazi qasha imoto Kepha njengoba kunjalo, kube nokuhlaselwa kwamaphekula, akuyona into engingayincoma. uma ungathandi ukuzijabulisa. Kunezinhlaka eziqashisa ngezimoto zomhlaba wonke njengeHertz noma i-AVIS futhi ungaqasha eyodwa esikhumulweni sezindiza uqobo noma ehhotela lapho uhlala khona. Kukhona zonke izinhlobo zezimoto, ezincane, ezinkulu, amaloli, amaveni amancane. Konke kuncike lapho uya khona.
Ekugcineni, uma ungumSpanish udinga i-visa ukungena e-Algeria. Kufanele uyicubungule cishe amasonto amane ngaphambi kosuku lwakho lokuhamba nge-Embassy kanye nama-Consulates kusukela lapho awekho ama-visa akhishwa emingceleni. Kufanele futhi ube nomshuwalense wokuhamba. Akukho ukugoma okuphoqelekile kodwa bekungeke kube buhlungu ukuthola eyodwa ye-tetanus ne-hepatitis A no-B, phakathi kokunye okungenzeka ukuthi usunayo kakade ngenxa yohlelo oludingekayo lokugoma.
Ngabe i-Algeria iyindawo okuyingozi ukuyiwa kuyo? Yebo, kungenzeka, ngoba kunamaseli asebenzayo amaqembu amaqembu amaphekula. Kube nokuhlaselwa ngonyaka owedlule futhi okwakamuva kakhulu, ngoFebhuwari nango-Agasti walo nyaka, i-2017, kepha izinhloso bekungezona izivakashi kepha amaphoyisa nezikhulu. Abezinye izizwe bathunjwa ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi emingceleni noma eningizimu, ngakho-ke akukhuthazwa ukuthi baye e-Greater South nasemingceleni yeNiger, Mauritania, Libya noma Mali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Afrika » I-Algeria » Yini ongayivakashela e-Algeria
Yini okudingeka uyazi ukuthi uzohamba nge-safari e-Afrika?